macruufka 8 Update dhib - dayactir macruufka 8 Dhibaatooyinka Hagaaji Si fudud
Talaabooyinka ay dayactir in macruufka 8 waa fudud quruxsan sida aan soo sheegnay ee maqaalka kale. Waxa ugu adag tahay in inta lagu guda jiro geeddi-socodka macruufka 8 update, waxaad la kulmi karaan dhammaan noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka, sida la'aanta bannaan, qalab ku xayiran on Apple logo, laga badiyay xogta, iwm Dhibaatooyinkaas idinku kexeeyo waalan. Marka dhibaatooyinka aad la kulmi, waxa ugu horeeya ee aan doonayaa in aan idiin sheegi waa "is dejisaan saaxiib! Waad qeybiso hesho qalab macruufka ah in ay ka shaqeeyaan. Taasi waa wax sax ah aad u baahan tahay in ay sameeyaan. " Hoos waxaa ku qoran dhibaatooyinka commons in laga yaabo in aad halka la xariirta arrimo 8 iyo xal la kulmaan. Su'aasha 1aad: Anigu ma ku shuban kartaa macruufka 8 la'aan boos lacag la'aan ah. Waxaa weydiiyo igu leeyihiin ugu yaraan 4.6 GB for my iPhone si ay kor si macruufka 8. Waa maxay sababtu? Sidee baan ku heli karaa 4.6GB for my iPhone inaad yeeshaan update macruufka 8?
Jawaab: Si loo xaliyo dhibaatada, Waxaan leeyahay dhowr xabbadood talooyin:
. a) Ha u cusboonaynta in macruufka 8 badan hawada , taasoo la micno ah ma u cusboonaynta in macruufka 8 on qalab aad si toos ah. Waxa loo baahan yahay kaydinta sida ugu badan laba jeer si ay u cusboonaynta in macruufka 8 via Lugood . Waxaad arki, waxa ay samaynayaan qalabka macruufka macnaheedu xirmo rakibo la soo bixi doonaa si qalab aad halka ay u qabanayaan ee Lugood, ku download iyo rakibi habka loo dhammeeyo doonaa on your computer.
b) .Haddii aad ku adkeyso in lagu casriyeeyo macruufka 8 on qalab aad si toos ah, wax ku bartaan siyaabaha si lacag la'aan ah ilaa meel qalabka macruufka .
Su'aasha 2aad: Waxaan u maleeyay in aan si guul leh martay nidaam ee la xariirta in macruufka 8. Si kastaba ha ahaatee, aan iPhone kaliya dhintay la Apple logo xayiran ku yaal.
Jawaab: Waxaa dhacda inta badan aad iPhone sababtoo ah sida caadiga ah uma bilaabi kara. Ha ka walwalin. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) on your computer. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. In uu furmo suuqa ugu weyn, guji "Guuleysatey qalabka '. Waxaa hagaajin doonaa dhibaatada.
Su'aasha 3aad: qalad ah ka dhacay halka degsado macruufka 8.
Jawaab: Waa in aad ogaato in hadda kun oo iPhone, iPad iyo iPod users xiriiri adduunka oo dhan ayaa isku dayaysa in ay casriyayso si macruufka 8. Waa wax iska caadi u adeegta Apple ayaa la dhibtoonayay u isticmaala inaad dhex gasho in ay sameeyaan casriyayn ah. Haddii aad heshid fariin ah 'qalad dhacay', ma ahan in heshiis weyn. Isku day mar kale. Ka sokow, xal ka wanaagsan in lagu casriyeeyo si macruufka 8 waa in degsado firmware ee macruufka 8 hore on your computer oo raaca Xulashada 2 ama 3 Xulashada si aad u cusboonaysiiso macruufka 8.
Su'aal 4: Waxaa xanibeen intii lagu guda jiray update macruufka 8
Jawaab: Si aad u xaliyo dhibaatadan, kaliya aad u baahan tahay inaad reboot qalab aad. Ku hay hoos hurdada / button Wake iyo button Home waqti isku mid ah oo ku saabsan 10 ilbiriqsi. Ka dib markii reboot qalab, u tag Settings> General> About si loo hubiyo version macruufka ah qalabka hadda socda. Haddii ma ahan macruufka 8, guuleysatey socodka ah ee macruufka 8 update mar kale.
Su'aasha 5: Waxaan updated 4s si aan macruufka 8. Waxaan ahay isagoo arrimaha badan oo: 1- Marka i soo wac waxa ay leedahay Artur ah oo ku saabsan 1.5sec in ay tagaan call a; Ilaa 2- Inta lagu guda jiro u wac aan signal dhaco, si eber heer ka dibna tagaa; 3- icon Ogeysiinta u muuqataa in ka badan 5 secs u WhatsApp. In kastoo aan didnt arimahan ee macruufka 7. Qof kasta oo kale arrimaha on 4s?
Jawaab: Waa wax iska caadi ah in lagu casriyeeyo si macruufka 8, aad iPhone 4s Hadhi. Sababtoo ah in iPhone 4s ma ku habboon yahay inuu ordo macruufka 8 In kastoo ay tahay liiska in la jaan qaada macruufka 8. Si loo xaliyo dhibaatada laggy, ikhtiyaarka kaliya ee aad u waa in la dardar macruufka ah 8 aad iPhone tan iyo markii aan aad hoos karo macruufka 8 ilaa macruufka 7 mar dambe.
Su'aasha 6: Ka dib markii la xariirta in macruufka 8 on 5s iPhone aan, anigu ma ciyaari karo songs qaar ka mid ah oo la soo degsan ee ah app xisbiga saddexaad. Heesahaas ayaa ka tago ka dib markii ciyaaro oo ku saabsan 10 ilbiriqsi.
Jawaab: Tani waxay dhacdaa inta badan, sababtoo ah app aad isticmaalayso lama jaanqaadi ee macruufka dambeeyay 8 aad rakibay on your iPhoen 5S. Waxaad 2 fursado si ay u xaliyaan dhibaatada:
1. Isticmaal Wondershare TunesGo in heesaha aad soo bixi ka iPhone wareejiyo si aad u computer hore. Markaas dajiyaan songs, kuwaas oo si Lugood iyo iyaga mar kale u hagaagsan in aad iPhone. Taas ka dib, waxaad isticmaali kartaa app Music ku saabsan iPhone si ay u ciyaaro.
2. Update ee cid saddexaad soo app aad ku rakiban in ay version ugu danbeeyay, in la hubiyo waxa ay si buuxda u la jaan qaada macruufka 8. Haddii aan, aad qabtid in ay sugto version cusub in lagu sii daayo.
Su'aasha 7: Waxaan leeyahay 5s iPhone, iyo tan aan la casriyeeyay si iOS8, waxaan dareemayaa sida haddii internet-ka ee aan telefoonka hoos Kobocii gabi ahaanba. Waxaan ahay waana hubaa ma aha arin aan internet sababtoo ah waxa ay u muuqataa ganaax ku ALL aan qalab kale. Tusaale aan u updated iPhone, waxay ku qaadan kartaa 30sec in daqiiqadii ah in webpage gaar ah cabbayso markii on my iPad (oo i havent la casriyeeyay) waxa kaliya ee qaadatay dhawr ilbiriqsi.
Jawaab: Marka hore, dib network iPhone aad by u socda Settings> General> celi> tuubada celi Settings Networking iyo xaqiijin tallaabada. Wixii faahfaahin dheeraad ah, fadlan booqo sida loo damiyo goobaha network on iPhone >> . Ka dib markaas, inaad si fiican u bilaabi lahaa 5s iPhone aad. Haddii weli aad u gaabis ah si ay u isticmaalaysa internet, ka dibna isku day in aad dardar macruufka ah 8 aad iPhone .
Su'aalaha 8: waxaan uun helay iPhone 6 Plus saaka maalintii la bilaabay. Waxaan xoojiyaa aan iPhone 5S ka dibna khali aan 6 Plus in dib loo soo celiyo iyo ka gurmad. Ka dib waxaa la sameeyey soo celinta ka gurmad iyo laga bilaabo syncing Chine oo dhan, Waayo, sawiro, iwm, si aan 6 Plus, waxa uu xayiran on qayb ka mid ah halkaas oo Chine syncing ay. Waxaa lulataa ka dib markii app ugu horeysay ama 2 aad ka tago dhegto rajo at "koobiyo 1/102 Apps".
Jawaab: Karaaniga ee Apple ayaa xaqiijiyay in uu jiro cayayaanka ah Lugood si hagaagsan barnaamijyadooda si iPhone. Xaaladdan oo kale, haddii aad u baahan tahay in ay barnaamijyadooda wareejiyo si aad iPhone, aad u baahan tahay si ay u sameeyaan xaq aad iPhone: xiriiriyaan iPhone in WiFi> tagaan si ay App Store inaad kala soo baxdo ama dib-u-download loo baahan yahay Chine in aad iPhone, samaynta barnaamijyadooda u hubiyo in aad duuban yihiin macruufka 8 socon. Haddii kale, waxay noqon doontaa waxtar lahayn oo ku saabsan iPhone 6 (Plus) / 6s (Plus). By jidkii, user ku xusan in uu soo celiyo gurmad iPhone 5s si iPhone 6 (Plus) / 6s (Plus), dhab ahaantii, anigu ma soo jeedin ha users kale sameeyo. Haddii lagu kaydin jiray oo aad iPhone 5s waa ka badan aad iPhone 6 (Plus) / 6s (Plus), markaas hubaal, markii dib u soo celinta, file gurmad ka buuxin doonaa iPhone 6 (Plus) / 6s (Plus), taasoo ka dhigeysa meel yar aad iPhone 6 (Plus) / 6s (Plus). Halkii, waxaad isku dayi kartaa MotileTrans Wondershare si ay u gudbiyaan files soo xulay 5s iPhone jir ah u iPhone 6 cusub (Plus) / 6s (Plus).
Best 15 Apps in uu ordo ee macruufka 8 habsami leh
Kabsado iPhone SMS ka dib markii macruufka 8 Hagaaji
Symbian in macruufka: Xiriir Kala beddelashada waa sidaas oo Easy
> Resource > macruufka > macruufka 8 Update Dhibaatooyinka - dayactir macruufka 8 Dhibaatooyinka Update Si fudud